ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ အလူမီနီယံသတ္တု မှအရည်အသွေးမြင့် အလူမီနီယံသတ္တု ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
YU WEI INDUSTRY SUPPLY CO., LTD. ၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါသည် အလူမီနီယံသတ္တု in Taiwan သောဈေးကွက်တွင်အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းရှိခြင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးစားရောင်းချသူအခြေစိုက်စခန်းထံမှဖြစ်ပြီးရရှိလာသောကြောင်းတန်းမြင့်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းကို အသုံးပြု. စီစဉ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ စံမျက်နှာစာများအတွက်သူတို့ကိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုအပြင်, ငါတို့သည်လည်းသူတို့ရဲ့သီးခြားလိုအပ်ချက်များအတိုင်းထိုထုတ်ကုန်ကို Customize option ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ပူဇော်ရမည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များကိုအလွန်သင့်လျော်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အကောင်းဆုံး အလူမီနီယံသတ္တု ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက်သင်သည် အလူမီနီယံသတ္တု ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ၊ OEM နှင့် ODM ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ခုမှ
အလူမီနီယမ် ingot AC2Bထူးခြားချက်: သိပ်သည်းဆနိမ့်. မြင့်မားသောပလပ်စတစ် လှပသောအသွင်အပြင်. မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိ ထူးခြားသောအပူနှင့်လျှပ်စစ်စီးကူးမှု အပြည့်အဝပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည် အရည်အသွေးကောင်း. ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများ. အမြန်ပေးပို့ခြင်း. ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သည် ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: အသွင်အပြင်:ငွေရောင်အဖြူရောင် အလေးချိန်:၆-တစ်လုံးလျှင် ၇ ကီလိုဂရမ် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း:၉၇-99% လစဉ်ထောက်ပံ့ရေးပမာဏ:၁၀၀၀ MT MOQ:၂၀ တန် ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု(စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါသည်): %,အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်,ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ. Si Fe မောင် Mn Zn 6.12-6.16 0.320-0.328 0.363-0.373 0.0739 0.180 ပြေတီ ဦး Cu Cr ဒေါ် Sn 0.125-0.128 2.46-2.48 0.0492 0.0152 0.0060 ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:၁၅ ဝန်းကျင်-၁၀၀ ရရှိပြီးနောက်ရက် ၂၀ အလုပ်လုပ်သည်%ငွေပေးချေမှုကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:ထွ-အလုပ်,FOB,CIF သို့မဟုတ်အခြားသူများတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်လမ်းဆိပ်ကမ်း:ကော့သောင်းငွေပေးချေမှု:၁၀၀%တီ/T order မှာယူမှုလက်ခံရရှိသည်.အထုပ်:သစ်သား pallet (သို့) သင်၏လိုအပ်ချက်အဖြစ်
Aluminium Alloy Ingots များ
လူမီနီယမ် ingot ADC12Cast aluminium alloy ingots များသည်အရည်ပျော်မှတ်နိမ့်သောလက္ခဏာများရှိသည်,ကြီးမားသောအပူစွမ်းရည်,နှင့်ခံနိုင်ရည်အားကောင်းသည်.မကြာမီနှစ်များအတွင်းက,ဆိပ်ကမ်းဆည်တည်ဆောက်ရေး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်-ချေးစီမံကိန်းများ,ဆန့်ကျင်-corrosion aluminium anode ingots များသည် anti များအတွက်အထူးပစ္စည်းများဖြစ်လာသည်-ချေးစီမံကိန်းများ.ဖြည့်စွက်ကာ,အလူမီနီယမ်အလွိုင်းများကိုလည်းအခြားအမှိုများနှင့်အပိုပစ္စည်းများ၏သတ္တုများပုံသွန်းရာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်;အပန်းဖြေအားကစားနှင့်ဆက်စပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများသည်သံမဏိသတ္တုများနှင့်ပလတ်စတစ်များမှပေါ့ပါးပြီးပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလိုအပ်ချက်အရပေါ့ပါးပြီးလှပသောလူမီနီယံသတ္တုစပ်များသို့တဖြည်းဖြည်းအသွင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။. ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သည် ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: အသွင်အပြင်:ငွေရောင်အဖြူရောင် အလေးချိန်:၆-တစ်လုံးလျှင် ၇ ကီလိုဂရမ် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း:98-99.7% လစဉ်ထောက်ပံ့ရေးပမာဏ:၁၀၀၀ MT MOQ:၂၀ တန် ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု(စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါသည်): %,အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်,ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ. Si Fe မောင် Mn Zn 9.5-12.5 1.အများဆုံး ၁ ခု. 0.6 အများဆုံး. 0.5 အများဆုံး. 1.4 အများဆုံး. ဒေါ် Sn Pb ပြေတီ ဦး အယ်လ်၊ 0.5 အများဆုံး. 0.4 အများဆုံး. 0.အများဆုံး ၁ ခု. 0.2 အများဆုံး. Rem. ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:၁၅ ဝန်းကျင်-၁၀၀ ရရှိပြီးနောက်ရက် ၂၀ အလုပ်လုပ်သည်%ငွေပေးချေမှုကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:ထွ-အလုပ်,FOB,CIF သို့မဟုတ်အခြားသူများတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်လမ်းဆိပ်ကမ်း:ကော့သောင်းငွေပေးချေမှု:၁၀၀%တီ/T order မှာယူမှုလက်ခံရရှိသည်.အထုပ်:သစ်သား pallet (သို့) သင်၏လိုအပ်ချက်အဖြစ်
အလူမီနီယံ Ingot Casting
အလူမီနီယမ် ingot ADC6ထူးခြားချက်: အလူမီနီယမ်ပါဝင်မှုမြင့်မားသည် မြင့်မားသော ductility ပိန်ပိန်ပါးပါး အချောထည်သည်သေဆုံးပြီးနောက်ဖြစ်သည်-ပုံသွင်းခြင်းကိုသေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းများတွင်သုံးနိုင်သည်(ဥပမာ:စက်ဘီးအစိတ်အပိုင်းများ)နှင့်မြင့်-ductility ထုတ်ကုန်များ. အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်း ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သည် ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: အသွင်အပြင်:ငွေရောင်အဖြူရောင် အလေးချိန်:၆-တစ်လုံးလျှင် ၇ ကီလိုဂရမ် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း:98-99.7% လစဉ်ထောက်ပံ့ရေးပမာဏ:၁၀၀၀ MT MOQ:၂၀ တန် ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု(စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါသည်): %,အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်,ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ. Si Fe မောင် Mn 0.301-0.427 0.288-0.293 2.93-3.28 0.514-0.516 ပြေတီ ဦး Cu Zn Cr 0.0117-0.0136 0.0209-0.0305 0.0188-0.0238 0.0293-0.132 ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:၁၅ ဝန်းကျင်-၁၀၀ ရရှိပြီးနောက်ရက် ၂၀ အလုပ်လုပ်သည်%ငွေပေးချေမှုကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:ထွ-အလုပ်,FOB,CIF သို့မဟုတ်အခြားသူများတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်လမ်းဆိပ်ကမ်း:ကော့သောင်းငွေပေးချေမှု:၁၀၀%တီ/T order မှာယူမှုလက်ခံရရှိသည်.အထုပ်:သစ်သား pallet (သို့) သင်၏လိုအပ်ချက်အဖြစ်
ကုမ္ပဏီသည်နှစ်ပေါင်းများစွာတည်ထောင်ခဲ့ပြီးကျွမ်းကျင်သောစက်ရုံထုတ်လုပ်မှုဖြစ်သော အလူမီနီယံသတ္တု ပေးသွင်းသူဖြစ်ပါသည်။ အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းစုဆောင်းနှင့်အတူ။ ကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထူးချွန်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ ထုတ်ကုန်များတည်ငြိမ်သောအရည်အသွေးနှင့်အလွန်အမင်းယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများရှိသည်။ အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များကို ပေး၍ အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အကောင်းဆုံးသောကောင်းမွန်သောစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်နှင့်ဆန်းသစ်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဖောက်သည်များနှင့်ရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။